Wayne Rooney oo dib ugu soo laabtay Ingiriiska, isla markaana xaqiijiyey inuu door ciyaaryahan iyo tababare ka qabanayo koox ka dhisan Dalkaasi – Gool FM
Wayne Rooney oo dib ugu soo laabtay Ingiriiska, isla markaana xaqiijiyey inuu door ciyaaryahan iyo tababare ka qabanayo koox ka dhisan Dalkaasi
(England) 06 Agoosto 2019. Wayne Rooney ayaa xaqiijiyey inuu ku biiray kooxda heerka labaad ee dalka Ingiriiska ee Derby County, balse kuma biiri doono illaa laga gaaro bisha Janaayo.
Kabtankii hore ee kooxda Manchester United ayaa maanta soo gaaray dalka Ingiriiska si uu u meel mariyo heshiiska uu ugu biirayo naadiga Derby, kooxdaasoo uu ka noqonayo caawiye tababare iyo ciyaaryahan.
Waxa uu halyeyga Man United ee Rooney soo dhammaysan doonaa xilli ciyaareedkan haatan socda ee horyaalka MLS-ka Mareykanka ka hor inta uusa ku biirin kooxdiisa cusub ee Derby County bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Rooney ayaa ka hoos shaqeyn doona tababare Philip Cocu, waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas 18-bilod ah, isagoo dookh loo siiyey inuu ku darsan karo sanad kale.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay fursadda ay ii soo bandhigay Derby County” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Wayne Rooney.
“Waan sugi kari la’ahay inaan ku biiro macallin Philip Cocu, shaqaalaha tababarka iyo ciyaartoyda kooxda koowaad laga bilaabo bisha Janaayo.”
“Waxaan hubaa inaan wax wayn ku soo kordhin doono, waana sugi la’ ahay inaan la kulmo qof walba oo kooxda ka mid ah gaar ahaan taageerayaasha, waxaan sidaas si la mid ah ugu faraxsanahay inaan waayahageyga tababarennimo ka bilaabo Derby County anigoo la shaqeynaya kooxda koowaad iyo akadeemiga.” ayuu Rooney hadalkiisa ku daray.
“Sidoo kale anigoo fursaddaan ka faa’iideysanaya waxaan u mahad-celinayaa DC United, milkiilayaashooda iyo taageerayaasha oo si fiican iila shaqeeyay, waxaan doonayaa inay ogaadaan inaan dadaalkeyga oo dhan ku bixin doono sidii ay ku soo gaari lahaayeen kulamada bug-baxa.” ayuu Wayne Rooney hadalkiisa ku soo xiray.
Arsenal oo amaah kula soo wareegeysa Philippe Coutinho, xilli saddex kooxood oo Ingiriiska ka dhisan ay tartan kala kulmayso